Koorsooyinka GvSIG ee Valencia - Geofumadas
koorsooyinka GvSIG ee Valencia
Oktoobar, 2009 Baridda CAD / GIS, GvSIG
Laga bilaabo rubuca hore ee 2010, Xarunta Tababarka Jaamacadda Florida wuxuu u adeegi doonaa koorsooyinka gvSIG, taas oo taariikhda la baray sida ku-xigeenka Dibloomada ee Xirfadlaha Dalxiiska ee Arrimaha Gudaha. Muddada saacadaha 20 laba toddobaad, ayaa loogu talagalay xirfadlayaasha, farsamoyaqaannada iyo saraakiisha doonaya inay galaan goobta GIS iyagoo isticmaalaya qalab xor u ah isticmaalka.
Waxaan u maleynayaa inay tahay dadaal fiican, oo leh taageerada Jaamacada Geography ee Valencia; kuwaan GvSIG waa in la sii wanaajiyo dhiirigelinta xarumaha tababarka si ay u doortaan kali-taliska oo keliya, laakiin sidoo kale inay gacan ka gaysato sii-wadiddeeda. Sababta ah sababta aan u sameyneyno dhiirigelintan.
Mawduuca waxaa loo qaybiyaa sida soo socota:
1 Hordhaca GIS lacag la'aan ah: GVSIG - SEXTANTE, SAGA, GRASS, KOSMO, GEOLIVRE LINUX, SPRING, GMT (Qalabaynta Khariidadda Guud).
2. Talaabooyinka ugu horeeya ee GVSIG desktop:
2.1 Furitaanka iyo kormeerida macluumaadka juqraafi.
Noocyada Sawirka iyo Raster.
Symbology 2.2. Sidee loo calaamadiyaa oo u calaamadee hay'adaha juqraafiyeed ee si sax ah oo muuqaal ah. Guryaha lakabyada. Qalabka iyo Meesha Goobta
2.3 Farsamaynta macluumaadka alfasayeed. Helitaanka macluumaadka ku xiran hay'adaha garaafka (jaantusyada), xulashada shuruudaha, ururada iyo xiriirinta ka dhexeeya miisaska. Xiriirinta Databas.
2.4 Vector Edition. Abuuritaanka / daabacaadda faylasha vector iyo macluumaadka la xiriira.
2.5 Gawaarida Geoprocessing. Nidaamyada aasaasiga ah ee lakabyada macluumaadka vector (meelaha saamaynta, xoqista, isgoysyada, ururada, fiyuusyada geesoolaha, iwm.).
2.6 Fulinta khariidadaha. Samee khariidado Geli qodobada iyo shirkadaha. Layout iyo diyaarinta tusaalooyinka si ay u daabacaan ama u dhoofaan qaabka "pdf"
3 GVSIG iyo Nidaamyada Macluumaadka Muuqaalka.
3.1 Helitaanka qolal sir ah oo lacag la'aan ah. Muujinta iyo la-tashiga macluumaadka bilaashka ah ee bilaashka ah (lafaha, caleenta, xogta deegaanka, iwm.) Iyada oo loo marayo internetka iyada oo loo marayo habka WMS, WFS iyo WCS.
3.2 Goobta magacyada meelaha. Raadinta iyo meesha juquraafi ahaanta juqraafi ah magaceeda.
Qiimaha waxaa loogu talagalay 190 Euros, inkastoo ay jiraan qiimo dhimis dadka leh xaaladaha qaarkood. Waxaa ugu wanaagsan in lala xiriiro telefoonka 654.868.267 ama email gerson.beltran (at) gmail.com
Post Previous«Previous SIG ee Cáceres
Post Next I-model, betley cusubNext »
3 Jawaabo "Koorsooyinka GvSIG ee Valencia"
Leonardo Ramiga isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan xiiseynayaa koorsada GVSIG waxaana jeclaan lahaa inaan ogaado sida aan u heli karo xitaa haddii aan ku khasbanaaday inaan ka baxo dalka. Runtii waxaan hayaa habka loo barto si loo xakameeyo barnaamijka si qotodheer laakiin Costa Rica ma aanan helin jaaliyad ama cidda ii ogolaaneysa inaan qaato koorso bilaash ah maadada.
Emailkaygu waa leomtb24@hotmail.com
Waad ku mahadsantahay dareenkaaga
Waxaan u diray e-maylka dadka gvSIG si ay ula soo xiriiraan ugana xisaabtaan su’aalahaaga.
Waxaan rajeynayaa inaad ku socon karto bulsho isticmaalaya Costa Rica.
fernando flores isagu wuxuu leeyahay:
Xarunta Tababarka Jaamacada ee Florida
Waxaan doonayaa in aan Seber sida ay u bartey i awood isticmaalaya gvsig, tan iyo markii aan ku noolahay Costa Rica iyo waxaan jeclaan lahaa in aan gelin karo dhaqanka la isticmaalayo nidaamka this macluumaad territotial, sidaas fidinayo isticmaalka software lacag la'aan ah ka mid ah asxaabta Latin America iyo in aan jaaliyadaha ka shaqeynaya imtixaanka shahaadada koowaad ee Dugsiga Dhulka, Cadastre iyo Geodesy ee Jaamacadda Qaranka.
Waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado waxa noqon lahaa hababka habboon ee iigu tababaranaya maamulka GvSig adiga adiga ama kuleejka juquraafi ee Valencia
Injineerka kuyaalka dhulka iyo geodesy